မကြာခင်နားဆင်ရတော့မယ့် Ah Boy နဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတို့ရဲ့ သီချင်းအသစ်လေး – ျမန္မာသတင္းစံု
ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ Myanmar Idol Season (3)ကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုကို စတင်ရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ပြိုင်ပွဲပြီးကတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး လက်ရှိမှာတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်တောင်ဖြစ်နေပါပြီနော်..။ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ သီချင်းတော်တော်များများကလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း သူမဟာ ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ခံစားချက်နဲ့ထပ်တူကျစေမယ့် သီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေရှေ့ချပြနိုင်အောင်ကြိုစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါသီချင်းလေးကတော့ “အငွေ့အသက်များ”လို့အမည်ရပြီး နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ah Boyနဲ့အတူ သီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသီချင်းအသစ်လေးအကြောင်းကိုတော့ “Coming Soon with Kyaw Phyo Tun သီချင်းနာမည်လေးက ဘာတဲ့တုန်း ??”ဆိုပြီး ချမ်းမြေ့မောင်ချိုက သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ မောင်ချိုလေးရဲ့ သီချင်းအသစ်လေးကို စောင့်မျှော်အားပေးကြမယ်မဟုတ်လား…ပြောပြခဲ့ပါဦးနော်..။
မၾကာခင္နားဆင္ရေတာ့မယ့္ Ah Boy နဲ႔ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳတို႕ရဲ႕ သီခ်င္းအသစ္ေလး
ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳကေတာ့ Myanmar Idol Season (3)ကေန ပရိသတ္အားေပးမႈကို စတင္ရရွိခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးကတည္းက အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ပရိသတ္အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ေတာင္ျဖစ္ေနပါၿပီေနာ္..။ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳရဲ႕ သီခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ပရိသတ္ေတြအႀကိဳက္နဲ႔ထပ္တူက်ခဲ့ပါတယ္။
လက္ရွိမွာလည္း သူမဟာ ခ်စ္ရတဲ့ပရိသတ္ေတြအတြက္ ခံစားခ်က္နဲ႔ထပ္တူက်ေစမယ့္ သီခ်င္းအသစ္ေလးတစ္ပုဒ္ကို ပရိသတ္ေတြေရွ႕ခ်ျပႏိုင္ေအာင္ႀကိဳစားေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဆိုပါသီခ်င္းေလးကေတာ့ “အေငြ႕အသက္မ်ား”လို႔အမည္ရၿပီး ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Ah Boyနဲ႔အတူ သီဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုပါသီခ်င္းအသစ္ေလးအေၾကာင္းကိုေတာ့ “Coming Soon with Kyaw Phyo Tun သီခ်င္းနာမည္ေလးက ဘာတဲ့တုန္း ??”ဆိုျပီး ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိုက သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ၾကီးေရ ေမာင္ခ်ိုေလးရဲ႕ သီခ်င္းအသစ္ေလးကို ေစာင့္ေမ်ွာ္အားေပးၾကမယ္မဟုတ္လား…ေျပာျပခဲ့ပါဦးေနာ္..။
Previous Previous post: မင်္ဂလာသက်တမ်း(၂၆)နှစ်ပြည်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါးအတွက် ကြည်နူးစရာ မင်္ဂလာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ငဲငယ်လေး
Next Next post: ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့အလှူအဖြစ် အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ကျောင်းတိုက်မှာ မိသားစုတွေနဲ့အတူတူ ဆွမ်းကပ်ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်